UJabra Elite 45h, iqabane elifanelekileyo lomsebenzi wefowuni [UPHONONONGO] | Iindaba zeGajethi
UJabra Elite 45h, iqabane elifanelekileyo lomsebenzi wefowuni [UHLAZIYO]
UMiguel Hernandez | 01/05/2021 12:00 | Ukuhlaziywa ukuba 29/04/2021 13:16 | ngokubanzi, Reviews
Umnxeba Kulapha ukuhlala kwaye kungena kwindlela yethu yokubona izinto, kangangokuba uninzi lwethu lukhethe ukuseka iofisi encinci emakhayeni ethu kwaye sibonile ukuba zibaluleke kangakanani izixhobo kubomi bethu bemihla ngemihla.
Jabra Uyingcali ekuboneleleni ngesandi kunye nevidiyo yeenkomfa zemveliso yazo zonke iintlobo zabasebenzisi kwaye ngeli xesha siza kugxila kwimveliso efanelekileyo. UKUYASijonga nzulu iJabra Elite 45h ngaphezulu kweendlebe zentloko, ezilungele ukusebenza ngomnxeba ngamava alungileyo, bafumanise nathi.
3 Unxibelelwano kunye nokuzimela
4 Umgangatho wesandi kunye namava omsebenzisi
Njengoko uyazi, iJabra yinkampani esetyenziselwa ukwenza iimveliso ezikumgangatho ophakamileyo, ikwalamava afanayo esiwafumanayo kwezi IJabra 45h. Ngokuphathelele ukupakisha, inkampani ihlala ibheja kubuncinci kunye nenkqubo ye-unboxing yemizi-mveliso engasixeleli nto. Into yokuqala esothusayo xa sibakhupha ngaphandle kwebhokisi kukukhanya kwabo okugqithileyo kunye nendlela abavakalelwa ngayo, ezi mpawu zihamba nazo kusetyenziso lwemihla ngemihla. Inkqubo yohlengahlengiso lweemilimitha ngaphandle kokukhwela kunye iindlebe ezingaphezulu kwendlebe ezingqinanga.
Ubungakanani: 186 * 157 * 60,5 mm
Ubunzima: I-160 gram
Imibala ekhoyo: Mnyama, Mnyama + Bhedu, Beige, Luhlaza, Mnyama, Mnyama + Mnyama Space
Ininzi enokwenza nayo into yokuba iseti yentloko yenziwe ngesikhumba sokwenziwa kwaye i-padding yigwebu lememori, ngokubonisa «L» kunye «R» ukubhola ngqo kubo. Sinobunzima obuyi-160 yeegram kuphela, into emangazayo, ehamba kunye nemilinganiselo ethintelweyo. Ewe ibhokisi iyazisa Intambo ye-USB-C eya kuthi isetyenziselwe ukutshaja isixhobo kwaye ubude bayo bube ziisentimitha ezingama-30, okusishiye siziva simuncu ngokujonga ukuba ii-headphone ngokwazo ziphantse zaba ziisentimitha ezingama-20 ubude xa zizonke.
Siya ngqo kwisithethi ngasinye, kokubini ekunene nasekhohlo banobubanzi obuziimilimitha ezingama-40, engalunganga kwaphela. Zombini zinokugquma nxamnye nengxolo yomoya eya kusinceda ukuba sincokole kwaye simamele umculo ngokuchanekileyo nangaphandle, into esiyiqinisekisileyo isebenza ngokuchanekileyo. Kwenzeka into efanayo ngengxolo kwiminxeba, ineemakrofoni ezimbini eziphetheyo ukuphucula ukusebenza kwelizwi lethu kwaye ngaloo ndlela siqiniseke ukuba umamkeli uyive ngokuchanekileyo yonke into esifuna ukuyikhupha.
Isithethi somculo bandwidth: 20 Hz ukuya kwi-20 kHz
Ukuthetha kwebhendi yesithethi: 100 Hz ukuya ku-8000 Hz
Iifowuni ezimbini zeMEMS
I-Bluetooth enezinto ezibini ezifanayo
Okumangalisayo kukuba, ngokungafaniyo nezinye iimveliso, inkampani iqinisekisa ukuba isixhobo inewaranti yeminyaka emibini phambi kwamanzi nothuli kwiwebhusayithi yabo, into endothusileyo. Kweli candelo kuncinci kunokufuneka ngokomsebenzi kwiJabra 45h Ezakhiwe ngezinto ezinamandla aphezulu ezinje nge-aluminium edibeneyo kunye ne-silicone eneoyile engenantambo. Inyani yile yokuba ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kuyancomeka kwinkcaso eyongezelelweyo ebonelelwa yile nto yonke.
Unxibelelwano kunye nokuzimela
Unxibelelwano luya kusekelwa kwi Bluetooth 5.0 Kule meko, nazo zonke iziqinisekiso eziyimfuneko zale njongo. Iiprofayili zeBluetooth zibalulekile xa umamele umculo kwaye Apha sizifumana njengongabikhoyo kakhulu kwi-Qualcomm's apt codec, Nangona kunjalo, sinazo eziqhelekileyo ezivela kwi-Apple kunye nezinye iinkampani: HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP v1.2.
Iqhosha elinikezelweyo lokucela i-Alexa, iSiri, iBixby okanye uMncedisi kaGoogle.
Ngokuphathelele ukuzimela, Asinayo idatha yobuchwephesha kwinqanaba lomthamo webhetri kwi-mAh. Okwangoku, ifemi ithembisa ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-50 zomculo, into esibe nakho ukuqiniseka ukuba ikufutshane nokusebenza kwenyani kwee-headphone. Kufuneka kuqatshelwe ukuba izibuko le-USB-C linohlobo "lwentlawulo ekhawulezayo" eya kuthi isinike iiyure ezili-10 zokuzimela kunye nemizuzu eyi-15 yokutshaja, Nangona ucinga ukuba ixesha lokuhlawulisa lilonke kunye neadaptha ye-5W ye-USB-C yiyure enye kunye nemizuzu engama-1, kubonakala kufana nentlawulo eqhelekileyo. Banendlela "yokulala" eya kuthi isebenze ngokuzenzekelayo ukuphucula ukusebenza kwebhetri xa singazisebenzisi kunye nokucima ngokuzenzekelayo emva kweeyure ezingama-30 ngaphandle kokuzisebenzisa.
Umgangatho wesandi kunye namava omsebenzisi
Njengoko kuhlala kunjalo ngemveliso ye-Shure, sifumana iseti yentloko efanelekileyo. I-bass ayimi ngokugqithileyo kwaye sinako ukwahlula zonke iintlobo zeetoni, ewe, kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba asinakufuna ngaphezulu kwezinye ii-headphone kuluhlu lwamaxabiso. Ngapha koko, ukurhoxiswa kwengxolo okwenzekileyo kwee-headphones kuyamangalisa xa ucinga ukuba "baphezu kwendlebe" kwaye abayivalanga ngokupheleleyo indlebe yethu.
Imakrofoni zisebenza kakuhle kakhulu kwiincoko ezinde, ukongeza, zahlula ingxolo yangaphandle enokuphazamisa okanye iphazamise iifowuni. Ezi ntloko zinobunzima obukhaphukhaphu kunye nokuzimela okukhohlakeleyo okusikhokelela ekubeni sicinge ukuba banokuba lukhetho olukhulu xa sithetha ngomsebenzi wefowuni. okanye ukuchitha ixesha elide eofisini ngaphandle koloyiko lokuthatha umnxeba. Azibangeli ukudinwa nasezindlebeni okanye entloko ngenxa yobunzima kunye nezinto zazo ezifanelekileyo cala kwaye iyamelana, into endicinga ukuba kufuneka ndiyigqamise kolu hlalutyo.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ukuba ufuna ukubaleka kwiifowuni ze-TWS xa usebenza ngomnxeba okanye uchitha iintsuku zeofisi ungakhange uyeke ukufowuna, ezi Jabra Elite 45h sisibonelelo esinomdla kakhulu kuluhlu lwamaxabiso aphantsi. Ungazithenga ngexabiso elingaphantsi kwama-99 euros kwiindawo eziqhelekileyo ezinje ngeAmazon. Andikwazi ukunceda kodwa khumbula ukuba asinayo i-aptX kwaye singabakhumbula, kunye nenyaniso yokuba ngenxa yesizathu esithile ukuba andiqondi ngokupheleleyo bagqibe kwelokuba benze ngaphandle kwe-3,5mm Jack port kunxibelelwano lwendabuko.
Ithunyelwe nge: Meyi 1 ye2021
Utshintsho lokugqibela: 29 April 2021
Uyilo olunqabileyo nolonwabisayo
Isandi esilungiswe kakuhle
Uluhlu lwamaxabiso ngokuqinileyo
Amaqhosha aphatha nzima
Intambo ye-30cm ye-USB-C
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » UJabra Elite 45h, iqabane elifanelekileyo lomsebenzi wefowuni [UHLAZIYO]
Isiseko seFresh´n Rebel Duo, uyilo kunye nokusebenza ngokuchaseneyo ngokutshaja ngaphandle kwamacingo
Phumelela i-Star Wars PS4, iiDVD kunye nezinto zokudlala. Thatha inxaxheba kwaye ufumane i-WinX DVD Ripper simahla